Wararka - Sidee loo doortaa mashiinka wax lagu gooyo ee galaaska ah?
Sidee loo doortaa mashiinka goynta dhalada?
1. Xulashada: iyadoo loo eegayo cabbirka goynta dhabta ah ee shirkadda lafteeda, dooro midda kugu habboon naftaada, qaabka mashiinka dhalada2621: 50 * 50 ~ 2440 * 2000mm, Model 3826: 50 * 50 ~ 3660 * 2440mm, tusaale 3829: 50 * 50 ~ 3660 * 2800mm, Model4228: 50 * 50 ~ 4200 * 2800mm
Si loo tixgeliyo aasaaska qaabka warshadda, maxaa yeelay waxay ku lug leedahay qalabka caadiga ah ee duugga ah iyo jeexjeexa iyo maalgashiga raasumaalka ah ee aan faa'iido lahayn
2. goynta saxnaanta: iyadoo loo eegayo baahiyahaaga dhabta ah ee aad doorato.
3. xawaaraha jarista: Xawaaraha jarista waa waxqabadka ugu weyn ee mashiinka jarista, kaliya farsamo iyo xakameyn qeyb ka mid ah waxqabadka guud iyo iswaafajinta xaaladaha wanaagsan, mashiinka goynta si loo gaaro xawaaraha u dhigma, sidaa darteed dhib malahan
waa maxay xawaaraha dhabta ah ee loo baahan yahay? Xawaaraha mashiinka goynta ayaa ah tilmaame wanaagsan oo muujinaya waxqabadka mashiinka goynta mustaqbalka.
4. Farsamaynta qalabaynta qaabaynta otomaatiga ah: heerka hagaajinta muraayadaha ayaa ah dammaanad muhiim ah heerka cabirka goynta muraayadda, kumbuyuutarka marka ay ku fiicnaato galmada laga yaabo inaanay ku guuleysan natiijooyin wanaagsan. tilmaame horumarka nidaamka is-hagaajinta.
5. qayb farsamo: xasiloonida iyo saxnaanta dammaanadda, tan hore waa qaybta farsamo ee naqshadeynta iyo rakibidda caqliga waxay noqon doontaa qodobbo muhiim ah. Si loo hubiyo habsami u socodka qaybta makaanikada iyo isbarbar dhigga tareenka hagaha labada dhinac. , sida looga hortago cilladaha iyo isbeddelka ka dib qaabka la sixi karo waa qayb muhiim ah oo ka mid ah baaritaanka mashiinnada.
6. shaqeynaya: shaqada mashiinka goynta sidoo kale waa calaamad muhiim ah oo lagu xaqiijinayo waxqabadka mashiinka jarista. Si toos ah ayuu u hagaajin karaa cadaadiska, shaqeynta iskaanka otomaatiga ah, wuxuu awoodaa 360 ° socod bilaash ah, calaamadeyn otomaatig ah, haddii ay jirto shaqeyn xaddidan qalab iyo wixii la mid ah.
Waqtiga boostada: Mar-17-2021